अमेरि’की डलरस’हित सबै देशका मुद्राको विनिमय दर बढ्यो ; हे’र्नुहोस् कुन दे’शको कति पु’ग्यो ? – Sadhaiko Khabar
अमेरि’की डलरस’हित सबै देशका मुद्राको विनिमय दर बढ्यो ; हे’र्नुहोस् कुन दे’शको कति पु’ग्यो ?
प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत्र ३१, २०७७ समय: २१:२२:२९
काठमाडौं/ मंगलबार अमेरिकी डलर`सहित सबै देशको विनिमय`दर बढेको छ । आज नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको विनिम`यदर अनुसार एक अमे’रिकी डलरको खरिद`दर १ सय १९ रुपैयाँ ८० पैसा तोकिएको छ भने बिक्रि’दर १ सय २० रुपैयाँ ४० पैसा तोकि`एको छ । यस्तै एक अस्ट्रेलियन डलरको ख`रिद दर ९१ रुपैयाँ ४० पैसा रहेको छ भने बि`क्रीदर ९१ रुपैयाँ ८६ पैसा रहेको छ ।
एक साउदी रियालको खरि`ददर ३१ रुपैयाँ ९४ पैसा तोकि|एको छ भने बिक्रिदर ३२ रुपैयाँ १० पैसा तोकिएको छ । एक कतारी रियालको खरिद दर ३२ रुपैयाँ ८९ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रि`दर ३३ रुपैयाँ ६ पैसा तोकिएको छ ।त्यस्तै एक कुवेती दिना`रको खरिद`दर ३ सय ९६ रुपैयाँ ९५ पैसा तोकिए`को छ भने बिक्रिदर ३ सय ९८ रुपैयाँ ९४ पैसा तोकिएको छ ।
एक युके पाउण्ड स्ट्रलिङको खरिद`दर १ सय ६४ रुपैयाँ ७० पैसा तोकिए`को छ भने बिक्रि`दर १ सय ६५ रुपैयाँ ५३ पैसा तोकि`एको छ। त्यस्तै जापानी येनको खरिद`दर १० रुपैयाँ ९६ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ११ रुपैया १ पैसा तोकिएको छ ।